Yintoni iBitcoin maximalist? | Klever ezezimali
Yintoni iBitcoin maximalist?
I-Bitcoin maximalists igcina ukuba i-Bitcoin kuphela kwe-asethi yedijithali eya kuba yimfuneko kwikamva. I-Bitcoin yeyona cryptocurrency idumileyo kwihlabathi.
Xa uSatoshi Nakamoto wadala i-Bitcoin, wayeneenjongo ezininzi ezibhalwe kwiphepha elimhlophe. Ngenxa yokwamkelwa kwabo kwangoko kwetekhnoloji, abamkeli bokuqala abakhange babe ngoosozigidi kuphela kodwa ngoku babizwa ngokuba I-Bitcoin maximalists.
Ngoobani iBitcoin maximalists?
Bathanda ukwamkela ngokupheleleyo ingqikelelo yeBitcoin, ukukhula kwayo, ukubala, kwaye kunzima ukwamkela ezinye ii-cryptocurrencies njengexabiso ngaphandle kwe "Bitcoin".
Kuhlala kukho uluvo lokuba "abakhulu" banomdla kuphela ekwandiseni inzuzo yabo ekubambeni nasekuthengiseni ezinye ii-cryptocurrencies ukuze babe neBitcoin engaphezulu. Oku kuye kwavunywa luluntu lweBitcoin ngokunjalo, apho abo bathandabuzayo nantoni na "crypto" engeyiyo iBTC babeya kwenza. ungaze ubambe ezinye iingqekembe okanye iimpawu.
Ukuze i-Bitcoin ibe yeyona mali yedijithali kuphela, i-Bitcoin maximalism kufuneka yoyise imiqobo ethile. Ngenxa yokuthintelwa kwenethiwekhi yeBitcoin kunye ne-cryptocurrency yayo, ezininzi ii-altcoins kunye neenguqu ezahlukeneyo ze-blockchain networks ziye zavela.
Nangona kunjalo kukho utshintsho oluhamba kancinci njengoko iiprojekthi ezininzi zithatha kancinci kancinci ukuqaqamba kwiBitcoin. Oku kuye kwaba nefuthe elibi kakhulu kuluntu lwe-Bitcoin, apho amalungu athambekele ekuthetheni ezinye iiprojekthi ezizayo ukwenzela ukunika i-Bitcoin ukhetho olufanelekileyo kwi-crypto sphere.
Ababizwa ngokuba yi-maximalists baye baxhasa iindibano ezininzi ngenjongo yokudala i-hype yeemfuno ze-Bitcoin phakathi kweenkokeli zehlabathi kunye namaziko emali. I-El Salvador iye yakhokela ekukhuthazeni ukusetyenziswa kweBitcoin njengethenda esemthethweni kunye nevenkile yexabiso.
Kubonakala ngathi injongo enkulu yeBitcoin sesinye sezizathu zokuba oorhulumente bangekayithathi njengesixhobo sezemali. Ngenxa yoko, abo banamandla bafuna ukuba wonke umntu acinge ukuba i-Bitcoin kuphela kwenkqubo yemali enexabiso elichazwe kuyo, ngelixa kukho ezinye ii-cryptocurrencies ezinexabiso eliqinisekisiweyo langaphakathi. Intsebenziswano phakathi kweeprojekthi ezikwinqanaba lophuhliso kunye neeprojekthi ezineemeko zokusetyenziswa ezimiselweyo ziya kwenza ukuba imarike ye-crypto ichume.
Ukuthandwa kwetekhnoloji ye-blockchain kukhokelele ekudalweni kwe-blockchains yabucala, iinguqulelo ezilungisiweyo ze-Bitcoin's ledger esasazwayo. Iinkampani kunye noorhulumente ke ngoko banokwenza uthungelwano lwe-blockchain yabucala apho bambalwa abathathi-nxaxheba abavunyelweyo ukufikelela kwinethiwekhi emva kokuqinisekiswa okanye ukuqinisekiswa. Le blockchain inokuvumela itekhnoloji evunyelweyo kunye nengenamvume ukuba isetyenziswe, kwaye inokumisela izithintelo kwizinto ezinokuthi zisetyenziswe ngabathathi-nxaxheba, njengokufunda kuphela kunye nokuhlela imisebenzi.
Umzekelo, urhulumente wengingqi unokukwazi ukunika izihloko ezisemthethweni kunye nokugcinwa kweerekhodi kubarhafi abathile kunye namashishini ngelixa ethintela ukufikelela koluntu kwezi rekhodi.
Ngenxa yalo lonke olu phuhliso kwinethiwekhi yeBitcoin, iBitcoin maximalists namhlanje ixhasa umbono wokuba impumelelo yemali yedijithali.ss ixhomekeke kwinethiwekhi ye-blockchain.
The Klever uluntu kunye Klever iqela lingabaxhasi abanyanisekileyo benethiwekhi yeBitcoin kunye nokusetyenziswa kwayo. Siyaqhubeka nokukhuthaza abantu ukuba bafune ulwazi kunye nethuba lokufumana ukuqonda okunzulu kweenzuzo kunye nokusetyenziswa kweBitcoin kunokuba babe ngabaxhasi (Bitcoin Maximists) njengoko kunjalo.
Akukho kalo 5 Iivoti: 3
Umthandi onomdla we-crypto kunye noluntu olunengqondo esebenzayo ukwenza umxholo wokufundisa wonke umntu okwinqanaba lam lempembelelo. Umrhwebi onentliziyo evulekileyo yokwamkela abantu abancinci abanqwenela ukufikelela kwimpumelelo yabo kwindawo yehlabathi.